Thola ngokuletha abasebenzisi ku-chatroulette noma nje uyifake kusayithi lakho!
I-Flirtymania ingxoxo yevidiyo exhumanayo
Mema ababukeli namantombazane abafuna ukuthola ngokusakaza. Sizokusiza ukuthi uthole inzuzo enkulu kunoma yikuphi ukuhola - okugqugquzela okuqukethwe, indalini kanye nokuthumela.
I-Flirtymania isebenza kuziphequluli kokubili PC namadivayisi eselula. Sebenzisa noma yikuphi uhlobo lomgwaqo ofuna ukunyuswa.
inzuzo ejwayelekile kusuka ekuholeni oku-1
Kunemifudlana eminingi yamahhala engxoxweni yethu yevidiyo. Noma kunjalo, okuqukethwe okushisayo kuyatholakala kuphela emva kokukhokha.
Izingcingo ezizimele nezijwayelekile
Izingcingo zangasese nezingxoxo zevidiyo zikhokhwa ngomzuzu.
Abasebenzisi bakhokhela imisebenzi ukuze bacele intombazane ukuba ichithe ngamanzi noma igxume.
Ukhokha ukubukela ukusakaza okudumile, izithombe namavidiyo.
Indlela yokuthola imali lapha
Siphakamisa amaphesenti kusukela entengo yenkonzo emahoreni ashintshaniswa ngemali yemali. $ 1 = 6000 zemali.
Ukuze uhoxise irejista yemali ku-ePayments, yakha isikhwama se-Bitcoin noma se-Yandex bese uthola izinkokhelo noma nini lapho ufuna khona.
Ungasebenzisa imali etholakalayo kwingxoxo yevidiyo.
Khuthaza ingxoxo yakho yevidiyo emakethe ejwayelekile
Abalingani bethu banokukhetha kwamazwe amaningi okukhuthazwa. Uhlelo lokusebenza luhunyushwa kuzo zonke izilimi ezidumile, kuhlanganise nabaseMpumalanga Ephakathi.
IsiNgisi, IsiJalimane, isiFulentshi, iSpanishi, isiCzech, isiRussia, isiTurkey, isiJapane, isiHebheru, isi-Arabhu
Ukuthumela imiyalezo ngaphakathi kolimi lomamukeli kuvumela ukuhlanganisa ithrafikhi evela emazweni ahlukene ngaphandle kwezinkinga ekuqondeni.
Qalisa isayithi lakho lekhamera yewebhu
Ungakha ingxoxo yethu yevidiyo kusayithi lakho noma uyidale kusukela ekuqaleni; akukho ukufaka uphawu oludingekayo, khetha kuphela isilinganiso sesikhathi sokuqukethwe kwakho: 12+, 14+, 16+ noma 18+.
I-Flirtymania ingxoxo yevidiyo eguquguqukayo esebenza kunoma yisiphi isiphequluli kuwo wonke amadivayisi. Hlanganisa ithrafikhi kusuka kumakhompyutha amaningana, ama-smartphone noma amaphilisi ukuze uzame ukunikezwa okuhlukahlukene.
Ukuxhumeka kwe-Google Analytics
Engeza ukuphikisa kwe-Google Analytics kumakhasi avakashelwe ukuhanjiswa ukuze uthole ulwazi mayelana nokuguqulwa nokuthenga.
Sisebenzisana nabanikazi bezingosi ezithumela izikhangiso kanye nezixhumanisi kuhlelo lwethu lokusebenza. Singahlinzeka ngemigomo enenzuzo ngisho nomthombo omncane ngezilaleli ezivuthiwe nezisebenzayo.
Bhala kithi: support@flirtymania.com
Silungiselele zonke izinto zokukhuphula ukuze uqale kalula. Manje awudingi ukuchitha isikhathi ukuze uzidale wena. Layisha iphakheji oyidingayo bese uqala ukukhuthaza!
Ubani ongajoyina uhlelo lokubambisana?
Noma ubani! Awudingi isimemo noma i-akhawunti ekhethekile yalokho. Vele uthole izixhumanisi zakho siqu namakhodi kusigaba esifanele.
Ngingayithola imali engakanani?
Lokho kuxhomeke kuwe kuphela! Sebenzisa zonke izindlela zokuphromotha - ngamasayithi, izikhangiso, izinkundla namanethiwekhi omphakathi ukukhulisa imiphumela yakho.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuhoxiswa?
Ngokuvamile isicelo senziwa cishe ezinsukwini ezingu-1-2. Uma kungaphezu kwezinsuku ezingu-5, thintana neqembu lethu lokusekela le-tech.
Ukuphendula imibuzo evamileUkuphendula imibuzo evamile